बर्राे नै नचिन्ने छ नेपाली पुस्ता तर यस्तामा जडी ओखती भनेर प्रयोग हुन्छ बर्रो - यादका टुक्रा
3 months ago 357 Views
कस्तो बर्राे औषधीय गुणले युक्त हुन्छ – बर्राेको फल संकलन गरिसकेपछि किराले नखाएका, पुष्ट र राम्रा दानाहरु छुट्ट्याएर घाममा सुकाइसकेपछि बोरामा हाली ओभानो ठाउँमा भण्डार गर्नुपर्छ । साधारणतया संकलित काँचो फल सुकाउँदा १० प्रतिशत तौल घट्छ । बर्राेलाई केका लागि उपभोग गर्ने ? – यसको फल ज्वरो नियन्त्रण गर्न, खाना पचाउन, दाँत बलियो बनाउन, घाँटी दुखेकोमा, कब्जियत, पखाला, दादुरा, गिँजाबाट रगत बग्न रोक्न, स्वर खुलाउन, आँखाको संक्रमण, आदिमा प्रयोग गरिन्छ । गाउँघरमा बर्रोको ताजा फल मसी बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।
तिब्बती प्रणालीमा बर्रोको बोक्रा कलेजो र फियोको संक्रमणमा प्रयोग भएको पाइन्छ । राउटे जातिले कमलो बर्रोको रस ज्वरो घटाउनका लागि उपयोग गर्छन । यसको काठ बलियो हुन्छ र काठलाई डुङ्गा र अन्य कृषि औजारहरु बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला हर्रो, बर्रो र अमलाको संमिश्रण हो । बर्रोको धूलो कब्जियतमा उपयोगी मानिन्छ । फलको गुदीदार भाग दाँत बलियो बनाउन एवं गिँंजाबाट रगत आउने रोगमा प्रयोग गरिन्छ । यसको बोक्रा र बिउमा भएको ट्यानिन छालामा चमक ल्याउन र धेरै वर्षसम्म टिकाउ बनाउन छाला उद्योगहरुमा प्रयोग गरिन्छ ।
Don't Miss it के हो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार ?
Up Next बिहेपछि यौन चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय
काजूले शरीरको शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ र यसले ब्याक्टेरियुरिया स्ट्रेप्टोकोकस मउन्टान्टेन्सको पनि सामना गर्दछ, जसले दाँत सम्बन्धि समस्या निम्त्याउछ। आधा…
दही स्वादिलो पेय । दही गुणकारी पनि । दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय…
7 months ago 3774 Views
एलोबेरा अर्थात घिउकुमारी औषधीय गुणको वनस्पती हो, जो सहजै बगैंचा वा करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । यसलाई सानो गमलामा रोप्न सकिन्छ…